पीएसजीमा कसले हान्छ पेनाल्टी ? | Hamro Khelkud
पीएसजीमा कसले हान्छ पेनाल्टी ?
एजेन्सी – यो सिजनको समरसँगै फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) मा स्टार खेलाडीको बाहुल्यता भएको छ । विश्व फुटबलमा छुट्टै पहिचान बनाएका स्टार फरवार्ड, डिफेन्डर र गोलरक्षकले पीएसजी भरिएको छ ।
दुई साताअघि मात्रै विश्व फुटबलका हस्ती अर्जेन्टिनी लियोनेल मेस्सी फ्रि ट्रान्सफरमा पीएसजी पुगेका छन् । स्पेनिस सेन्टरब्याक सर्जियो रामोस पनि फ्रि एजेन्टमा रियल म्याड्रिडबाट पीएसजी पुगेका छन् । स्टार खेलाडीद्वय ब्राजिली नेयमार जुनियर र फ्रान्सेली केलियन एमबाप्पे पीएसजीमै रहेका छन् ।
जिओर्जिनिओ वाइनाल्डम र अचरफ हाकिमी पनि यसै समरमा पीएसजी पुगेका छन् । स्टार खेलाडीले भरिएको पीएसजीको मुख्य लक्ष्य च्याम्पियन्स लिग जित्नु नै रहेको छ ।स्टार खेलाडीले भरिएको पीएसजीले खेलमा पेनाल्टी पाउँदा कसले प्रहार गर्ला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
अझ पिएसजीमा चार खेलाडी एकैपटक खेलेको अवस्थामा कसले पेनाल्टी प्रहार गर्ला भन्ने सबैलाई चासो हुनेछ । मेस्सीले बार्सिलोनामा लगातार पेनाल्टी प्रहार गर्दै आइरहेका छन् । क्रिस्टियानो रोनाल्डोको बर्हिगमनपछि रियल म्याड्रिडमा सर्जियो रामोसले पेनाल्टी प्रहार गर्दै आएका थिए । पीएसजीमा नेयमार र एमबाप्पेले आलोपालो पेनाल्टी प्रहार गर्दा प्राय पेनाल्टी नेयमारले नै प्रहार गर्ने गर्दछन् । पेनाल्टी प्रहारकै विषयमा नेयमार र एडिन्सन काभानीबीच विवाद भएको फुटेज बाहिरिएको थियो ।
एक टोलीमा चार जना पेनाल्टी प्रहार गर्ने खेलाडी रहँदा मेस्सी र नेयमारले पेनाल्टी प्रहार गर्ने सम्भावना बढी छ । तर मेस्सीको पेनाल्टी तथ्यांक खासै राम्रो छैन । मेस्सी पीएसजी जानुअघि नेयमारले पहिलो रोजाईमा पेनाल्टी प्रहार गर्दै आइरहेका छन् । मेस्सी र नेयमारको अनुपस्थितिमा यो जिम्मेवारी एमबाप्पेले पाउने सम्भावना छ । त्यसपछि मात्रै रामोसको पालो आउन सक्नेछ ।
तर यो निर्णय प्रशिक्षक मौरिसियो पोचेटिनोको निर्णयमा नै भर पर्नेछ । अर्थात खेलाडीहरुबीच नै समझदारी पनि हुन सक्ने सम्भावना छ । यसअघि मेस्सीले बार्सिलोनामा रहँदा पटक पटक अन्य खेलाडीलाई पेनाल्टी प्रहार गर्न दिएको नजिर पनि छ ।
मेसी, नेयमार, एमबाप्पे र रामोसको पेनाल्टी तथ्यांक
मेसीले अहिलेसम्म आफ्नो करियरमा १३० पेनाल्टी प्रहार गरेका छन् । त्यसमध्ये उनले १०१ लाई गोलमा परिणत गरेका छन् । बाँकी २९ पेनाल्टी चुकाएका छन् । यो तथ्यांक हेर्दा उनी पेनाल्टी प्रहारमा ७७ प्रतिशत सफल छन् ।
त्यस्तै, नेयमारले हालसम्म ७६ पेनाल्टी प्रहार गरेका छन् । जसमध्ये ६२ पेनाल्टीमा गोल गरेका छन् । १४ पेनाल्टी चुकाएका छन् । यो तथ्यांकलाई हेर्दा नेयमार ८१ प्रतिशत सफल छन् । भेट्रान डिफेन्डर रामोसले हालसम्म ३५ पेनाल्टी प्रहार गरेका छन् । जसमध्ये ३० गोल हुदा ५ चुकेको छ । यस हिसाबमा एमबाप्पे पेनाल्टी प्रहारमा ८५ प्रतिशत सफल छन् ।
एमबाप्पेले हालसम्म १६ पेनाल्टी प्रहार गरेका छन् । जसमध्ये १३ गोल भएको छ । ३ पेनाल्टी चुकेको छ । उनी पेनाल्टी प्रहारमा ८१ प्रतिशत सफल छन् ।
पछिल्लो तथ्यांकमा मेस्सी, नेयमार र एमबाप्पेभन्दा रामोसको रेकर्ड राम्रो छ । उनले पछिल्ला १० पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गरेका छन् । नेयमार र एमबाप्पे दुबैले पछिल्ला १० मध्ये ९ पेनाल्टीमा गोल गरेका छन् । मेस्सीले १० मध्ये ८ लाई गोलमा परिणत गरेका छन् ।